ဘီအက်ဖ် ၁၀၉ - ဝီကီပီးဒီးယား
၎င်းကို Bayerische Flugzeugwerke တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သော Willy Messerschmitt နှင့် Robert Lusser တို့မှ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။  ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရေးသမား အဖြစ် စိတ်ကူး ထားသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ဗုံးကြဲလေယာဉ်အစောင့်အကြပ် ၊ တိုက်လေယာဉ်ဗုံးကြဲလေယာဉ် ၊ နေ့ - ည၊ မိုးလေဝသတိုက်လေယာဉ် ၊ မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ် ၊ နှင့် ကင်းထောက်လေယာဉ်များ အဖြစ် တာဝန်များစွာထမ်းဆောင်ရန် တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ပြည်နယ်အများအပြားသို့ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး စစ်အပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာ နိုင်ငံအများအပြားတွင် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ Bf 109 သည် သမိုင်းတစ်လျှောက် ထုတ်လုပ်မှု အများဆုံး တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပြီး ၁၉၃၆ ခုနှစ်မှ ဧပြီလ ၁၉၄၅ ခုနှစ်အထိ စုစုပေါင်း ၃၃,၉၈၄ လေယာဉ်များ ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ 
<i id="mwMg">Bf 109 ကို Jagdgeschwader</i> 52 ပျံသန်းစဉ်တွင် ၉၂၈ ကြိမ်အောင်ပွဲများ သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။အဓိကအားဖြင့် အရှေ့ဘက်ခြမ်း တွင် ပျံသန်းနေစဉ် Bf 109 အား ထိပ်တန်းတိုက်လေယာဉ် ၃ စင်းမှ ပျံသန်းခဲ့သည်။ ရန်သူ့လေယာဉ် များကို အပစ်ချနိုင်ဆုံး လေသူရဲ ဖြစ်သည့် Erich Hartmann သည် ရန်သူ့လေယာ်ဉ် စုစုပေါင်; ၃၅၂စီး ပစ်ချနိုင်ခဲ့သည်။။ ရန်သူလေယာဉ် ၁၅၈ စီး (သုံးပုံတစ်ပုံခန့်) ပစ်ချခဲ့သော မြောက်အာဖရိက စစ်ဆင်ရေး၏ အတော်ဆုံး လေသူရဲ Hans-Joachim Marseille မှလည်း ပျံသန်းခဲ့သည်။ အီတလီ၊ ရိုမေးနီးယား၊ ခရိုအေးရှား၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့် ဟန်ဂေရီတို့မှ လေယာဉ်မှူးများလည်း Bf 109 ပျံသန်းခဲ့သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြင့် Bf 109 သည် နောက်ဆုံးပေါ် မဟာမိတ်တိုက်လေယာဉ်များနှင့် စစ်ပွဲပြီးဆုံးသည်အထိ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခဲ့သည်။ 
၁.၄ လက်နက်ခဲယမ်းများနှင့် ဂွန်ဒိုလာအမြောက်များ
၁၉၃၃ ခုနှစ်အတွင်း ၊ Reichsluftfahrtministerium (RLM) ("Reich Aviation Ministry") ၏ နည်းပညာဌာနမှ Technisches Amt (C-Amt) သည် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေး၏ အနာဂတ်အတွက် သုတေသနပရောဂျက်များ အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ လေ့လာမှု၏ရလဒ်မှာ အနာဂတ်လေယာဉ်အတွက် ကျယ်ပြန့်သော အကြမ်းဖျင်းလေးခုဖြစ်သည်- 
နည်းဗျူဟာမြောက် ဗုံးကြဲလေယာဉ်ဒီဇိုင်းRüstungsflugzeug II
ထိုင်ခုံနှစ်လုံးပါသည့်လေးလံသောတိုက်လေယာဉ်ဒီဇိုင်း Rüstungsflugzeug IV
Rüstungsflugzeug III ကို တာတိုးကြားဖြတ်တိုက်လေယာဉ်အဖြစ်ပြီး Arado Ar 64 နှင့် Heinkel He 51 biplanes တို့ကို အစားထိုးရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ 
V1 ရှေ့ပြေးပုံစံ ရေးဆွဲခြင်း။
Messerschmitt ပရောဂျက်နံပါတ် P.1034 တွင် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစာချုပ်ကို ပေးအပ်ပြီးနောက် သုံးပတ်အကြာ မတ်လ ၁၉၃၄ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ အခြေခံပုံသဏ္ဍန်ကို မေလတွင် အပြီးသတ်ခဲ့ပြီး ပိုမိုအသေးစိတ်သော ဒီဇိုင်းပုံစံသည် ၁၉၃၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ RLM သည် ဒီဇိုင်းကို "Bf 109" အမျိုးအစားအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ 
အစောပိုင်း Bf 108 ကဲ့သို့ပင်၊ ဒီဇိုင်းအသစ်သည် လေယာဉ်အတွင်းရှိ သီးခြားအစိတ်အပိုင်းအရေအတွက်ကို နည်းပါးစေရန် ရည်ရွယ်သည့် Messerschmitt ၏ "ပေါ့ပါးသောတည်ဆောက်မှု" နိယာမကို အခြေခံထားသည်။ ဤကွင်းပိတ်များသည် အင်ဂျင်အောက်ပိုင်းအတက်အဆင်းများနှင့် ဆင်းသက်သည့်ဂီယာဆုံချက်အမှတ်တို့ကို ယူနစ်တစ်ခုတွင် ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည်။ Firewall တွင် ကြီးမားသော ဖောင်တွဲတစ်ခုသည် ပင်မ spar pick-up အမှတ်များကို ထားရှိကာ wing load အများစုကို သယ်ဆောင်သည်။ 
လန်ဒန်တော်ဝင်လေတပ်ပြတိုက် ရှိ Bf 109E သည် ၎င်း၏တောင်ပံများကို ခေတ္တဖယ်ရှားခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊
20 ကိုပြသသည့် JG 51 'Molders' ၏ Bf 109E-3 တောင်ပံတွင် mm MG FF တပ်ဆင်မှုများ။
အလေးချိန်နိမ့်၊ ဆွဲငင်နိမ့်၊ ရိုးရှင်းသော မိုနိုလေယာဉ်များပေါ်တွင် Messerschmitt ၏ယုံကြည်ချက်ကို ထင်ဟပ်စေပြီး လက်နက်များကို လေယာဉ်ကိုယ်ထည်တွင် ထားရှိခဲ့သည်။ ဤအရာက အတောင်ပံများကို အလွန်ပါးလွှာပြီး ပေါ့ပါးစေသည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း စက်သေနတ်နှစ်လက်ကို ကာဗာတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး အင်ဂျင်အပေါ်ပိုင်းနှင့် ပန်ကာအကွေးမှတဆင့် အမြှောက်ဆံများကို ပစ်ခတ်သည်။ ဂျာမန်ဘာသာဖြင့် Motorkanone mount ဟုသိကြသော အင်ဂျင်၏ဆလင်ဒါဘဏ်များကြားရှိ ပေါက်ကွဲမှုပြွန်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် အော်တိုကန်နွန် တစ်ခု ပါဝင်သော အစားထိုးအစီအစဉ်ကိုလည်း ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။  ဤသည်ကိုလည်းပြင်သစ်ကဲ့သို့အချို့ခေတ်ပြိုင် monoplane တိုက်လေယာဉ်များပေါ်တွင်လက်နက်ကိရိယာ layout ကို၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။
Luftwaffe မြေပြင်အမှုထမ်းများသည် Rüstsatz VI အောက်ဆွဲဂွန်ဒိုလာအမြောက်အစုံပါရှိသော Bf 109G-6 အား နေရာချထားခြင်း။ ဆိပ်ကမ်းတောင်ပံ၏ ဦး ဆောင်အစွန်းရှိ slat ကိုမှတ်သားပါ။ JG 2၊ ပြင်သစ်၊ ၁၉၄၃ နှောင်းပိုင်း။
Bf 109 Gustav လေယာဉ်မှူးခန်း
အသစ်ထုတ်လုပ်သည့် Messerschmitt Bf 109 တိုက်လေယာဉ်များ၊ 1936-45။ 
Messerschmitt GmbH၊ Regensburg ၂၀၃ ၄၈၆ ၂,၁၆၄ ၆.၃၂၉ ၁,၂၄၁ ၁၀.၄၂၃
အာရာဒို ၊ Warnemünde ၃၇၀ ၃၇၀
</br> လိုက်ပ်ဇစ် ၆၈၃ ၈၇၅ ၂၊၀၁၅ ၄,၄၇၂ ၁၊၀၁၈ ၉.၀၆၃
Gerhard-Fieseler-Werke ၊ Kassel ၁၅၅ ၁၅၅
WNF၊ Wiener Neustadt ၈၃၆ ၁,၂၉၇ ၂၂၀၀ ၃.၀၈၁ ၅၄၁ ၇.၈၉၂
Győri Vagon- és Gépgyár, Győr ၃၉ ၂၇၀ ၃၀၉
AGO ၊ Oschersleben
</br> (Fw 190A ထုတ်လုပ်မှု သို့ ပြောင်းခဲ့သည်) ၃၈၁ ၃၈၁
↑ Radinger and Otto 1999, pp. 35–37.
↑ ၄.၀ ၄.၁ Zobel and Mathmann 1995, p. 3.
↑ ၅.၀ ၅.၁ Ritger 2006, p. 6.
↑ U.S. Strategic Bombing Survey, Aircraft Division Industry Report.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘီအက်ဖ်_၁၀၉&oldid=731202" မှ ရယူရန်
၂၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၆:၃၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၆:၃၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။